Monday, May 20th, 2019 - 14:18:33
Monday December 17, 2018 - 13:35:24 in Wararka by kubadbile news
Da’yartakooxda Ajax Amesterdam ayaa ku guulaystay abaalmarinta sanadlaha ay bixisio jariirada Tutto Sport ee kubada dahabiga ee da’yarka ugu wanaagsan.
Kabtanka Ajax Matthijs de Ligt ayaa ku guulaystay abaalmarinta Golden Boys oo ay jariirada Tutto Sport ee dalka Talyaaniga sanadkasta ku abaalmariso ciyaartoyda da’da 21 sano iyo kasii yar isla markaana ugu wanaagsan heerka bandhiga wanaagooda ciyaareed.
Laacibka oo si weyn loola xiriirinayo kooxda Horyaalka Spain haysata ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Manchester City oo iyana horyaalka Ingiriiskaoo ay da’diisu tahay 19 snao ayaa ku guulaystay abaalmarinta kadib markii uu helay codadkii ugu badnaa.
De Ligt ayaa abaalmarinta kaga guulaystay laacibka Roma garabka kaga ciyaara Justin Kluivert, daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold, weeraryahanka Milan Patrick Cutrone iyo da’yarta Real Madrid Vinicius Junior, waxaana sanadki hore abaalmarinta ku guulaystay weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe .
LaacibkaRoma Kluivert ayaa aad ugu cadcadaa abaalmarinta intii ay codeyntu socotay waxaase maanta ay Tutto Sport ku dhawaaqday in De Ligt uu ku guulaystay.
Abaalmarinta oo ay Tutto Sport bilowday 2003isla markaana u jeedkeedu uu ahaa in ay dhiirogelin ugu samayso xiddigaha mustaqbalka wanaagsan ku yeelan kara kubadda cagta waxaa laacibki u horeeyay eek u guulaystay uu ahaa Rafael van der Vaart oo isnaAjax u ciyaaray waxuunaDe Ligh noqonayaa laacibkii labaad ee dalka Netherland u dhashay ee hanta abaalmarintan.
Waxaana horay abaalmarinta ugu guulaystayxiddigo ay kamid ahaayeen Mbappe, Paul Pogba, Wayne Rooney, Raheem Sterling, Iscoiyo Lionel Messi, basle De Ligh waxuu noqonayaa daafacii ugu horeeyay ee abaalmarintan hanta.